Ndị Na-agụ Kpakpando Esoro Otu “Kpakpando” Rute Ebe Jizọs Nọ | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
GỤỌ NKE Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Nigerian Pidgin Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
NDỊ NA-AGỤ KPAKPANDO ESORO OTU “KPAKPANDO” BỊA JERUSELEM, SOROKWA YA RUTE EBE JIZỌS NỌ
E nwere ụmụ nwoke si n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ bịa. Ha bụ ndị na-agụ kpakpando. Ha na-ekwu na ha na-eji ebe kpakpando dị ama ihe na-eme ná ndụ ndị mmadụ. (Aịzaya 47:13) Mgbe ha ka nọ n’obodo ha n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ, ha hụrụ otu “kpakpando.” Ha sooro ya gaa ọtụtụ kilomita. Kpakpando ahụ edurughị ha gaa Betlehem, kama o duuru ha gaa Jeruselem.
Mgbe ndị ahụ na-agụ kpakpando rutere Jeruselem, ha jụrụ ndị mmadụ sị: “Olee ebe onye ahụ a mụrụ ịbụ eze ndị Juu nọ? N’ihi na anyị hụrụ kpakpando ya mgbe anyị nọ n’ebe ọwụwa anyanwụ, anyị bịara ịkpọrọ ya isiala.”—Matiu 2:1, 2.
Ezigbo iwe were Eze Herọd nọ na Jeruselem mgbe ọ nụrụ ihe a. Ọ kpọkọtara ndị isi nchụàjà niile na ndị isi okpukpe ndị Juu ndị ọzọ ma jụwa ha ebe a ga-amụ Kraịst. Ha chetara ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru ma zaa ya na “ọ bụ na Betlehem.” (Matiu 2:5; Maịka 5:2) Herọd kpọziri ndị ahụ na-agụ kpakpando na nzuzo ma sị ha: “Gaanụ chọọ nwatakịrị ahụ nke ọma, mgbe unu chọtara ya, bịanụ kọọrọ m, ka mụ onwe m kwa wee gaa kpọọrọ ya isiala.” (Matiu 2:8) Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na Herọd chọrọ ịmata ebe nwa ahụ nọ ka o gbuo ya.
Mgbe ndị ahụ na-agụ kpakpando si na nke Eze Herọd lawa, otu ihe dị ịtụnanya mere. “Kpakpando” ahụ ha hụrụ mgbe ha nọ n’ebe Ọwụwa Anyanwụ gawara n’ihu ha. O doro anya na kpakpando a abụghị kpakpando nkịtị. Ihe mere o ji pụta bụ ka o duo ha. Ha sooro ya ruo mgbe ọ kwụsịrị n’elu ụlọ ebe Josef na Meri na nwa ha nọ.
Mgbe ndị ahụ na-agụ kpakpando banyere n’ụlọ, ha hụrụ nwatakịrị ahụ bụ́ Jizọs na nne ya bụ́ Meri. Ha kpọọrọ Jizọs isiala, nyekwa ya ọlaedo, frankinsens, na mea. Ma, mgbe ha chọwara ịlaghachi na nke Herọd, Chineke gwara ha ná nrọ na ha anwakwala anwa gaghachi na nke Herọd. Ha sizi ụzọ ọzọ laghachi n’obodo ha.
Ònye ka i chere na ọ bụ ya mere ka “kpakpando” ahụ pụta? Cheta na kpakpando ahụ edurughị ha gaa ozugbo n’ebe Jizọs nọ na Betlehem. Kama, o bu ụzọ duru ha gaa na nke Eze Herọd, onye chọrọ igbu Jizọs. Herọd gakwaara egbu Jizọs ma a sị na Chineke abịaghị gwa ndị ahụ na-agụ kpakpando ná nrọ ka ha ghara ịlaghachi gaa gwa Herọd ebe Jizọs nọ. O doro anya na ọ bụ onye iro Chineke, bụ́ Setan, chọrọ igbu Jizọs. O mekwara ka “kpakpando” ahụ pụta ka o nwee ike imezu ihe ọ chọrọ.
Olee otú anyị si mara na “kpakpando” ahụ ndị na-agụ kpakpando hụrụ abụghị kpakpando nkịtị?
Olee ebe Jizọs nọ mgbe ndị ahụ na-agụ kpakpando bịakwutere ya?
Olee ihe mere anyị nwere ike iji kwuo na ọ bụ Setan dutere ndị ahụ na-agụ kpakpando na Jeruselem?
Ihe anyị kwesịrị icheta ọ̀ bụ naanị mgbe Jizọs bụ nwa ọhụrụ? Ole ndị bụ ndị amamihe atọ ahụ a sịrị na ha bịara hụ Jizọs? Gịnị ka Jizọs na-eme ugbu a?